သမီးမိုက် မဖြစ်စေ နဲ့ ( အ ရမ်း ကောင်း လို့ ဖတ် စေ ချင်) – Let Pan Daily
သမီးမိုက် မဖြစ်စေ နဲ့ ( အ ရမ်း ကောင်း လို့ ဖတ် စေ ချင်)
စာဖတ်မပျင်းပါနဲ့ ….ဖတ်ကြည့် စေ ချင်ပါတယ် ။ ညီမလေး တို့ရေ ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်မှာ စာတော် တဲ့ သမီးလေး ရှိတယ် ၊ တစ်နေ့ သမီးလေး ဟာ အတန်းတင် စာမေးပွဲမှာ ပထမ ရတယ် ။
အဖေဟာ ဝမ်းသာလွန်း လို့ လိုချင် တာဝယ်ပေးမယ် ပြောတယ် ။သမီးလေးဟာ သိပ်လိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ အဖေမှာ ပိုက်ဆံ မရှိမှန်းသိလို့ မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတ်အစား တစ်စုံကိုလိုချင်တယ်လို့ ပြောလိုက် တယ် ။
လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံ ဖို့ ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်း လွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- ဒါကြောင့် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ
နောက်တစ်နေ့မှာ အဖေဟာ သမီးလေး လိုချင်တဲ့ အဝတ် တစ်စုံကို ပေးလိုက် တယ် ၊ သမီးလေးဟာ ဝတ်ကြည့်ပြီး မှန်ရှေ့မှာ ပျော်လို့ ၊ အဖေ ကလည်း သမီးလေးကို ကြည့်ပြီး ပျော်လွန်းလို့ မျက်ရည် စို့နေရှာ တယ် ၊ မပျော်နိုင်သူက အမေပါ ။
ဒီလိုနဲ့ သမီး ၁၀ တန်းကို ဂုဏ်ထူး အများကြီး ရပြီး အောင် သွားတယ် ၊ ဆေး တက္ကသိုလ် တက်ဖို့ အဖေ့မှာ ပိုက်ဆံ မရှိမှန်း သိလို့ မပူဆာ ပါဘူး ၊
တစ်ပတ် လောက်ကြာတော့ အဖေက ပိုက်ဆံတွေ ထည့် ထားတဲ့ လွယ်အိတ်ကြီး ကို ပြပြီး သမီးမပူနဲ့ ၊ အဖေ့မှာ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရှိတယ် ၊ သမီး ဆရာဝန် ဖြစ်တဲ့ထိ လုံလောက် ပါတယ်တဲ့ ။
သမီးလည်း ဝမ်းသာလွန်း လို့ ထ ကနေတယ် ၊ အဖေ ခမျာ လည်း သမီးကို ကြည့်ပြီး ပျော်လွန်းလို့ ပါးပြင် ပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ၊ မပျော်နိုင်သူက အမေပါ ။
ဟုတ်ပါတယ် ၊ သမီးလေး ပြန်လာတာပါ ၊ဒါပေမဲ့ အသက်ရှင်လျှက် မဟုတ်ပါ ၊ ပိတ်ဖြူအုပ်ထား တဲ့ သမီးလေးရဲ့ ရုပ်အလောင်း ။ လာပို့တဲ့ သူတွေထဲက လူကြီး တစ်ယောက်က ပြော တယ် ၊ သူတို့ သမီးလေးဟာ သူ့ရည်းစား ပစ်သွားလို့ မနေ့ညက အဆိပ်သောက် သတ်သေသွား တယ်တဲ့ စဉ်းစားစရာ အတွေးလေးပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ ။ ” မိမိ ကို မနှစ်သက် လို့ စွန့်ခွာ သွားသူ အတွက် အသက် ပေးသင့် သလား ? မိမိ အတွက် အနစ်နာခံ ခဲ့သူတွေ အတွက် အသက်ပေးဖို့ မသင့် ဘူးလား ? ”
သမီးမိုကျ မဖွဈစေ နဲ့ ( အ ရမျး ကောငျး လို့ ဖတျ စေ ခငျြ)
စာဖတျမပငျြးပါနဲ့ ….ဖတျကွညျ့ စေ ခငျြပါတယျ ။ ညီမလေး တို့ရေ ဆငျးရဲတဲ့ လငျမယား ၂ ယောကျမှာ စာတျော တဲ့ သမီးလေး ရှိတယျ ၊ တဈနေ့ သမီးလေး ဟာ အတနျးတငျ စာမေးပှဲမှာ ပထမ ရတယျ ။
အဖဟော ဝမျးသာလှနျး လို့ လိုခငျြ တာဝယျပေးမယျ ပွောတယျ ။သမီးလေးဟာ သိပျလိုခငျြခဲ့ပမေဲ့ အဖမှော ပိုကျဆံ မရှိမှနျးသိလို့ မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတျအစား တဈစုံကိုလိုခငျြတယျလို့ ပွောလိုကျ တယျ ။
လူအမြားနဲ့ ဆကျဆံတဲ့နရောမှာ သငျ့ကို လကျခံ ဖို့ ခဈြခငျဖို့ ဆိုတာ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ- မလိုအပျဘူးထငျပွီး သငျ့ ရဲ့ဆကျဆံပုံ ဆကျဆံနညျး လှဲမှားသှားခဲ့ရငျတော့ သငျ မိတျပကျြပါပွီ- ဒါကွောငျ့ ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့လိုကျပါ
နောကျတဈနမှေ့ာ အဖဟော သမီးလေး လိုခငျြတဲ့ အဝတျ တဈစုံကို ပေးလိုကျ တယျ ၊ သမီးလေးဟာ ဝတျကွညျ့ပွီး မှနျရှမှေ့ာ ပြျောလို့ ၊ အဖေ ကလညျး သမီးလေးကို ကွညျ့ပွီး ပြျောလှနျးလို့ မကျြရညျ စို့နရှော တယျ ၊ မပြျောနိုငျသူက အမပေါ ။
ဒီလိုနဲ့ သမီး ၁၀ တနျးကို ဂုဏျထူး အမြားကွီး ရပွီး အောငျ သှားတယျ ၊ ဆေး တက်ကသိုလျ တကျဖို့ အဖမှေ့ာ ပိုကျဆံ မရှိမှနျး သိလို့ မပူဆာ ပါဘူး ၊
တဈပတျ လောကျကွာတော့ အဖကေ ပိုကျဆံတှေ ထညျ့ ထားတဲ့ လှယျအိတျကွီး ကို ပွပွီး သမီးမပူနဲ့ ၊ အဖမှေ့ာ ပိုကျဆံတှေ အမြားကွီးရှိတယျ ၊ သမီး ဆရာဝနျ ဖွဈတဲ့ထိ လုံလောကျ ပါတယျတဲ့ ။
သမီးလညျး ဝမျးသာလှနျး လို့ ထ ကနတေယျ ၊ အဖေ ခမြာ လညျး သမီးကို ကွညျ့ပွီး ပြျောလှနျးလို့ ပါးပွငျ ပျေါမှာ မကျြရညျတှနေဲ့ ၊ မပြျောနိုငျသူက အမပေါ ။
ဟုတျပါတယျ ၊ သမီးလေး ပွနျလာတာပါ ၊ဒါပမေဲ့ အသကျရှငျလြှကျ မဟုတျပါ ၊ ပိတျဖွူအုပျထား တဲ့ သမီးလေးရဲ့ ရုပျအလောငျး ။ လာပို့တဲ့ သူတှထေဲက လူကွီး တဈယောကျက ပွော တယျ ၊ သူတို့ သမီးလေးဟာ သူ့ရညျးစား ပဈသှားလို့ မနညေ့က အဆိပျသောကျ သတျသသှေား တယျတဲ့ စဉျးစားစရာ အတှေးလေးပေးလိုကျပါ တယျဗြာ ။ ” မိမိ ကို မနှဈသကျ လို့ စှနျ့ခှာ သှားသူ အတှကျ အသကျ ပေးသငျ့ သလား ? မိမိ အတှကျ အနဈနာခံ ခဲ့သူတှေ အတှကျ အသကျပေးဖို့ မသငျ့ ဘူးလား ? ”
မိဘများ သတိထားကြပါ ကလေးတွေ ဖုန်းကြည့် များလွန်းရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုး (၁၀) ခု
ပိုက်ဆံ တစ်ကျပ်မှ မရှိဘဲ စတင်လုပ် နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း (၆) မျိုး
“လူနာကြည့် မလာပါနဲ့” ရွှေမြန်မာ တို့ သိထားစရာ ဆေးရုံမှာ လူနာကြည့် သွားတဲ့အခါ
မိန်းမ ရဲ့ ဆေးတွေ အမြဲ ခိုးသောက်နေတဲ့ ယောက်ျား ရဲ့ စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ အဖြစ်